Poplar Muti Zvinoreva & Symbolism | Muti Symbolism & Zvinorehwa - Zviratidzo Zvinoreva
Poplar Muti Zvinoreva & Symbolism
Poplairi miti inoshamisa ine midzi yakasimba kwazvo, inovapa kukosha kwekufananidzira kwevhu, chengetedzo uye kugadzikana. Izvowo ivhu rakazvimirira, rinotungamira kutarisirwa kushoma, kana kuripo, kukura hutano uye hwakasimba.
Vashandi vechiedza vanotitaurira kuti Poplar inowanisa mikana pamwe nekuratidzwa. Kana iwe uchida chimwe chinhu nekukurumidza, Wakakurumbira mweya unogona kazhinji kutsigira icho chinangwa mukati kamwe kutendeuka kweiyo Wheel. Poplar inodedera nesimba rakasimba rePasi kusanganisira iro rinosanganisirwa nemari, kupa uye kugona kwemashiripiti kwevanhu kukunda kunyangwe zvakaomesesa mabhureki. Vamwe vanofunga kuti kuteerera pamopoplar mashizha kana mhepo ichivhuvhuta zvinyoronyoro imwe nzira yekuwana mameseji kubva kuhupenyu hwekare, Yedu Yepamusoro Yekuzvipira uye yeVamwari.
Muchiratidzo cheCelt, Poplar inoratidza seimwe tsamba muOgham Alphabet, ine mifananidzo makumi maviri. Muti wega wega unomiririra chaiwo masimba esimba. Edad itsamba yePoplar (dzimwe nguva Birch), iyo inomiririra kusagadzikana kwedu uye kutya kwedu kazhinji zvine chekuita nenyaya dzekuchengetedza.
MuCeltic Runes, Poplar inomiririrwa naBerkanan (zvakare akasungirirwa saizvozvo kuBirch). Mune ino yekushopera system inomiririra kubereka, kuvimbisa, hudiki uye zvakawanda. Izvi zvinoita sekunge zvinopesana neOgham, asi kana iwe ukafunga kuti mangani ekusahadzika kwedu kwevanhu anosunga kune izvi zvinofa zvinhu, izvo zviviri zvinoratidza dichotomy iyo inowanikwa mumitauro yakawanda yekufananidzira.
Tinoona Poplar, Aspen uye Birch zvakasungirirwa pamwechete muzvinyorwa kunyanya panoshandurwa zvinonetsa. Nyaya dzeHeracles dzinomuratidza aine Poplar korona mushure mekuuraya Cacus (chiratidzo chekukunda uye gamba). Vamwe vanoona iyo Aspen seMuti weKwindla uye kufa. Izvi zvinowirirana nazvo kuva zvitsvene kuna Hecate neEgeria. Zvinyorwa zvaPlato zvinoratidza kuti Poplar yakashandiswa mukushopera, ndosaka vazhinji vachigadzira maseti erune kubva pairi kusvika nhasi uno. Ziva kuti chena kana sirivheri fir ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo, ine chekuita netariro uye kuvimbiswa uko seNhema poplar inowanzove neyakaipa marevo uye zvinoreva kusanganisira kurasikirwa uye kufa
Poplar Muti Kufananidzira Zvinoreva:
Chinhu chemvura; Kudzivirirwa; Kufembera; Kutaurirana; Kukunda; Kubudirira; Chiito cheumhare; Kurangarira; Kutsungirira; Kukunda
Crystal Kubatana kwePoplar Muti:
Howlite; chena Aragonite; White Opal; White Kunzite; Sonorian Desert Agate; Ocean Jasper
Poplar Muti Zvinoreva Tafura yezviri Mukati
Victorian Mutauro weMaruva
Aromatherapy uye Imwe Mishonga
Zvinoreva zveMweya & Metaphysical Matches
Dzokera kuRuva Zvinorehwa
Poplar Muti Ruvara Zvinorehwa
Ipo poplar ichiuya mune mamwe mavara vanhu vazhinji vanofunga nezvemuchena, wakagadzirwa bark remuti uyu pavanofunga nezvePoplars. Muchena ivara rakachena, rinowanzoshandiswa kumiririra zvinhu zvisina kuchena uye zvine hutano. Zvisinei, bark raPoplar rine matanda uye nzvimbo dzakasviba. Zvinoreva kuti tinogona kuwana kubva pane izvi ndezvekuti hapana mumwe wedu asina mhosva. Tinokura uye tinodzidza, uye tinowana makwinya munzira, asi zvinogona kuramba zviri chinhu cherunako.
Poplar Muti Kurota
Yakatwasuka uye yakatetepa - ndiwo meseji wePoplar; namatira pairi! Gara wakadzika muchokwadi. Icho chinzvimbo chesimba. Inogona zvakare kuratidza mufaro uye kubudirira. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvemiti inoonekwa muhope dzako nekureva kuduramazwi redu reroto.
Poplar Muti Mumutauro weVictorian Wemaruva
Poplar inowana zita rayo kubva kune genus (Populus). Iri zita rinodzokera kutsika yechiRoma yekushandisa poplar pamucheto kwenzvimbo dzemusangano weveruzhinji (imwe tie kuukama).
Mishonga yevanhu inokurudzira kukohwa kwechinyakare Poplar bark seyakajairika toniki, kunyanya kudzora fivha uye manyoka. Iyo ine astringent, antiseptic uye anti-kuzvimba hunhu. Kana ichishandiswa sechikamu cheBharisamu yeGiriyedhi, poplar buds inomutsa. Muchii vanonatsa itsvo. Poplar muti muto unogadzira yakanaka yekunze chizoro chemavanga.
Mukubatana neBlack Cohosh uye Celery uye yakagadzirwa kuita tii, izvi zvinovandudza kugaya.
Poplar Muti Zvinoreva zveMweya & Metaphysical Mitauro
Miti yemupoplar kana zvinonhuwira zvakagadzirwa kubva muhuni hwayo zvinoshandiswa kazhinji mukuita mashiripiti kweshanduko uye kubudirira. Inotakura kudedera kwekufanoona, kuchengetedza, kushingaira, kutaura kune simba, kuvandudza uye kupora. Ziva kuti Bharisamu yeGiriyedhi inosanganisira Poplar sechinhu. Varapi vakatakura izvi mumakiti avo kazhinji vachipa kune avo vakatambura moyo wakaputsika kana kusuwa.
Sechinhu chiri mumazango, Poplar inogara ichiita mukuchengetedza mabasa ichiwana ichi chiratidzo kubva pakushandisa kwayo kwekutanga mukugadzira nhoo. Kutakura runako rwepoplar kana talisman inokwezvawo mari uye nheyo dzakasimba dzemari.
Varapi vanofamba astral vanoshandisa Poplar mashizha sechibatsiro pamwe nekuwedzera poplar kumafuta ekubhururuka. Iwo mweya wePoplar inongedzo yakajeka munyika yekuuka nekuona ichokwadi, pamwe neyakavaka bhiriji pakati pePasi neMweya nzvimbo.
Varapi vanobva mutsika dzakasiyana dzemashiripiti senge kushandisa poplar mune yekuuka mawands uye pendulums. Kupfuura izvi, muti wePoplar unowoneka muCeltic Tree Astrology sechiratidzo chesarudzo dzinovimba, kugona, kurongeka, kuvimbika uye kuvimba.
Poplar Muti Kutenda Mashura:
Zvinonzi muti wePoplar unodedera nekuzvidemba nekuti ihuni hwakava muchinjikwa waKristu
Poplar Muti Kuverenga
MuNumerology Poplar inoderedza kusvika pa6, inova nhamba inoenderana inoratidza hutano, kuchengetedzeka, dzidzo, nharaunda, uye hukama hwakasimba naAmai Vakuru. Sechokwadi semidzi yePoplar inoibata yakasimba, iyo mitanhatu inodedera inotsigira kubatana kweboka. Pasi pemumvuri wemhuri dzePoplar kana mapoka anouya pamwechete. Ino inzvimbo yakanaka yemitambo yakanangana nekuregerera, kururamisira kana kusunga. Poplar, senge yechitanhatu zvakare yakavanzika chivimbo. Kana iwe uchida kuchema kwakanaka kana kungo buda, tsvaga iye kunze.
leo mukadzi uye libra murume hupenyu hwewanano
Poplar Muti Nhoroondo
Miti yemipoplar yakatanga muAsia neEurope uye ikauya muUnited States kuti ishandiswe semuti wekugadzira miti uye semumvuri. Iyo inofarira zuva uye haina kunyanyisa kupokana nezve mamiriro evhu. Inobereka nekutumira masucker kubva kuna mai midzi. Izvi, zvakare, zvinogadzira Poplar makoloni (ndiwo maratidziro aakaita kusangana nemapoka / nharaunda). Dambudziko rega neizvi nderekuti poplar inogona kutyisidzira mimwe miriwo yemuno. Pamwe mune izvi mharidzo yeMweya wePoplar ndewekuti: 'panogona kuve nechakawandisa chechinhu chakanaka.'
Imwe nyaya yechiGiriki inotaura nezve nymph inonzi Leuce. Pluto aida chisikwa ichi, uye paakafa Zeus akamuita muWhite Poplar yaizogara nekusingaperi muElysium.
Isu tinoudzwa kuti Bacchic Rites yaisanganisira vanopemberera vakapfeka Poplar mashizha vachikudza Vamwari vePasi. Chaive chitsvene kuna Zeus uye chaishandiswa mukupa, uye Persephone yakachiitawo sechitsvene. Vamwe vadzidzi vengano vanoti shizha repoplar rakacheneswa ne sweat raHerakles. Robert Graves muWhite Mwarikadzi anotaura nezve poplar sechikamu cheutatu hwerumuko pamwe chete nemisipiresi uye alder.
Kuenderera mberi muchirevo cheGreek-Roman, tinowana nyaya yekuti Poplar yakawana sei chimiro. Sezvineiwo yaimboita senge mimwe miti, ichigara ichivavarira kutambanudza matavi ayo mberi. Humwe husiku mbavha yakatsvaga kuvanza goridhe remurarabungu ndokufunga kuti Poplar yakapa nzvimbo yakanaka. Iris paakaona goridhe rake risipo akatsvaga rubatsiro kuna baba vake Zeus uyo akatumira Mercury kutsvaga.
Mercury akapinda musango ndokumutsa mweya yemiti. Akabvunza kana paine akamboona goridhe. Vese vakati kwete. Mercury akabva akumbira kuti miti yese isimudze matavi awo kuti atarise. Chokwadi goridhe rakadonha kubva pamatavi emapoplar. Muti wemuti wakashamisika zvikuru uye ukavimbisa kubva pazuva iro zvichienda mberi kuti agare akasimudza matavi ake kuitira kuti pasave nemunhu aigona kuchengeta zvinhu zvakavanzika. Ichi ndicho chikonzero Poplar inoonekwa semuti wekuvimbika uye nehunhu, matavi ake akatwasuka semweya wake.
vari virgo mukadzi uye leo murume anoenderana
chii chinzvimbo chinonzi mercury kubva kuzuva
gemini murume uye virgo mukadzi anoda kuenderana
sei capricorn inokwezva kune geminis